iFixit dia mampiseho amintsika ny efijery Mini LED an'ny iPad Pro vaovao. Vaovao IPhone
Efa manana ny vaovao isika iPad Pro eo amintsika. Natolotra, nanafatra ary natolotra. Ary toy ny mahazatra, ireo tovolahy ao amin'ny iFixit dia tsy nanam-potoana fakana singa iray ary napetraka ny visy.
IPad Pro vaovao izay tsy miova firy amin'ny endriny teo aloha ny maodely fa ny singa rehetra ao aminy. Efijery vaovao, fikirakirana vaovao, fakan-tsary vaovao ary antennas 5G vaovao. Andao hojerentsika a dismounting voalohany.
Vondron'ilay iPad Pro vaovao no niditra tao amin'ny laboratoara an'ny iFixitAry ny teknisianiny dia tsy naka iray segondra mba hampidirana ilay visy hamily "hijerena" izay ao anatiny.
Ny efijery XDR vaovao, ny fampidirana ny Processeur M1 ary ny fakan-tsary vaovao anoloana dia mampiakatra ny iPad Pro vaovao amin'ny sehatra hafa avo kokoa noho ny ambin'ny iPad an'ny orinasa.
Tamin'ny sambo no nahitan'izy ireo izany tsy mitovy ny firafiny ny maodely teo alohany. Asio hafanana hanalefaka ny lakaoly izay manatevin-daharana ny écran amin'ny chassis sy voila! tsinay izany.
Ary ny zavatra voalohany hitan'izy ireo ambanin'ny efijery dia ny vaovao Antenna 5G manodidina ny sisin'ny frame, ary ny processeur M1 vaovao an'ny Apple. Vaovao ihany koa ny fakan-tsary eo alohany, miaraka amin'ny fomba fijery be dia be.
Ary mazava ho azy, zava-baovao iray hafa ny Fampisehoana Mini LED. Hatramin'izao, ny jiro backs an'ny iPad taloha dia namboarina tamin'ny jiro LED hita teo amin'ny sisin'ny efijery.
Etsy ankilany, ity iPad Pro vaovao misy Mini LED efijery ity dia mampiasa rafitra fanamafisana hafa, miorina amin'ny kely Grilles LED Manome kalitao sy fampifanarahana sary tsara kokoa izy ireo.
Ireo no fiheverana voalohany taorian'ny nanesorana ny tontonana fampisehoana. Vetivety dia hamarana ny fandalinana ireo singa rehetra izy ireo, ary ho afaka hanome antsika fanadihadiana feno kokoa momba ny iPad izy ireo Mahery kokoa izay tsy mbola nataon'i Apple, tsy isalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » iFixit dia mampiseho amintsika ny efijery Mini LED an'ny iPad Pro vaovao
Apple Music dia hanana "Hetsika Manokana" aorian'ny WWDC rahampitso